Underworld: Rise of the Lycans (2009) ဒုတိယကားမှာလဲ ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးမှုကို သောက်သောက်လဲ ရရှိခဲ့တဲ့ Underworld ဟာ ဒုတိယကား ထွက်ရှိပြီးနောက် ၃နှစ်အကြာ မှာ တတိယကားကို ထပ်မံရိုက်ကူးခဲ့ပြန်ပါတယ် တတိယကားမှာလည်း ဒုတိယကားကိုပြန်လည် ဇာတ်လမ်းဆက်ထားပြီး ဒုတိယ ကားရဲ့ အဆက် လိုင်ကန်တွေရဲ့ သမိုိင်းရာဇ၀င်နဲ့ ဗန်ပိုင်းယားတို့ရဲ့ Slave တွေအကြား ပဋိပက္ခတွေနဲ့ သန့်စင်တဲ့ သွေးရဲ့ မူလအစမျိုးဆက်ကို လိုက်လံဖော်ထုပ်ကြပြီး အမှောင်ခေတ်တွေမှာ လိုင်ကန်တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် လူစီ ဟာ ဦးဆောင်ပြီး သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီး ဗစ်တာ ကို တော်လှန်ပုံကန်ပါတော့တယ် အဲ့ကြားမှာ ဆယ်လီ တယောက် ဘယ်လိုများ ၀င်ရောက်ကြားညှပ်မိမလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှူလိုက်ကြပါတော့နော် Credit Review: ဇာတ်ကားအညွှန်းအား CM မှ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်
IMDB: 6.6/10 142,317 votes
Up (2009) ဒီတစ်ခါတော့ ကာတွန်းကား ကောင်းကောင်း လေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကားလေးက ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ထွက်ခဲ့ပြီး၊ စထွက်ခဲ့တဲ့အချိန်ထဲက အခုအချိန်အထိ Valentine’s Day ရုပ်ရှင်အဖြစ် လူကြိုက်များခဲ့သလို၊ သူ့ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေး တစ်ခုက အချစ် နဲ့ပတ်သက်လာရင် အခုအချိန်အထိ လူပြောများနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Up ကာတွန်းလေးက သာမန် ကာတွန်းကားတစ်ကား တင်မဟုတ်ပဲ၊ အက်ရှင် ဒရမ်မာ ကောင်းကောင်း နဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Animated Film တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း ကောင်းကောင်း နဲ့ လူကြီး လူငယ် ပရိတ်သတ် အားလုံးကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေတော်တော်များများ ကြည့်ဖူးပေမယ့် ကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်ဝဲလောက်အောင် ခံစားချက်ရသပေးနိုင်တဲ့ ကားမျိုး က လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ ဒီ UP ကတော့ ဇာတ်လမ်း အစမှာထဲက တင်ဆက်ပုံကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဖမ်းစားသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ...
Exam (2009) Exam (2009) ========== ဒီဇာတ်ကားလေးမှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လူတွေကရောဂါမကူးခံရအောင်အာရုံစိုက်နေ တဲ့အချိန်အလုပ်တွေရှားပါလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကအလုပ် ခေါ်တဲ့အကြောင်းလေးပါ။အလုပ်လိုချင်တဲ့လူပေါင်းများစွာထဲကမှာ နောက်ဆုံးစကာတင်ရှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရှစ်ယောက်ကို နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ချက်ထပ်မံဖြေခိုင်းခဲ့တာပေါ့။ကဲနောက်ပိုင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ကြည့်ရူပါလို့ညွှန်းဆိုပါတယ်။ Movie Review ကို WIN HD MOVIE Page မှကူးယူထားပါတယ်
IMDB: 6.9/10 94,407 votes
Air Doll (2009) "I'm an air doll. A substitute for handling sexual desire." အမျိုးသားတွေ လိင်စိတ်ဖြေဖျောက်လိုတဲ့အခါ အသုံးပြုဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လေမှုတ်အရုပ်ကလေးတစ်ရုပ်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးကို ဒီစာသားနှစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ ဖော်ပြမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ ဖော်ပြချက်တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသား ဒါရိုက်တာ Hirokazu Koreeda ရဲ့ Air Doll (2009) ရုပ်ရှင်ထဲက လေမှုတ်အရုပ်မလေး Nozomi အတွက်တော့ ဒီဖော်ပြချက်ဟာ မလုံလောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက I foundaheart လို့ ဆက်ပြောသွားခဲ့လို့ပဲ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ ရုပ်ရှင်ထဲ နည်းနည်း တိုးဝင်ကြည့်ကြတာပေါ့။ တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ် ပုံရိပ်တွေ စတင်ချိန်မှာပဲ လူတစ်ယောက်ဟာ အလုပ်ကနေ အိမ်ကို ပြန်လာနေခဲ့တာကို စမြင်ရပါတယ်။ သူ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သာမန်အတိုင်းပဲ ညစာထမင်းဝိုင်း ...
IMDB: 6.9/10 5,278 votes
Ninja Assassin (2009) Full house (ချစ်စံအိမ်( မှာ ဆောင်ဟေကိုနဲ့ အချစ်ဟာသအလွမ်းဇာတ်ကို အစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ရိန်းရဲ့ အက်ရှင်ကားကောင်း ပြန်ကြည့်ချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ… Ninja Assassin (2009) သည် IMDb 6.4/10 Google users 95% ဒါရိုက်တာ James McTeigue က ရိုက်ကူးထား၍ Matthew Sand, J. Michael Straczynski တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Rain, Rick Yune, Naomie Harris တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… နင်ဂျာ လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ မိဘမဲ့ဘဝကတည်းက သူ့ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သူကို ပြန်လည်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ… အညွှန်းကိုတော့ FOF မှကူးယူဖော်ပြထားပါတယ်။ Translator - Aung Myint ...
IMDB: 6.4/10 63,972 votes
2012 (2009) မကြည့်ဖူးသေးရင်ကြည့်ကြည့်လိုက် ဇာတ်ကား တစ်ကားရှိတယ် အဲ့ကားက မြောက်ကိုရီးယာမှာ ကြည့်ရင် သေဒဏ်ထိ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တယ်။ အာ့ဆို အဲဒီ ဇာတ်ကားက ဘာကားမို့လိုလဲ 2012မှာကမ္ဘာပျက်တဲ့ အကြောင်း ကို ရှုပ်ရှင်ရိုက်ပြထားတာဗျ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မြောက်ကိုရီးယာကလည်း 2012က သူတို့ တိုင်းပြည်ထူထောင်းခြင်းနှစ်ရာပြည့်ဗျာ အဲနှစ်မှာ ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဘလာဘလာဘလာ ရည်မှန်းချက် တွေရှိတယ်ဗျ ထားပါတော့ တကျောင်းတဂါထာပေါ့ သေချာတာက 2012 ဆိုတဲ့ကားက အခုထိ ကမ္ဘာပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဆွေနွေးငြင်းခုန်စရာ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေ အများကြီး ရှိနေခဲ့တယ် အကြောင်းကတော့ ဇာတ်ကားကတော့ သဘာဝဘေး လူလုပ်ဘေးတွေကြောင့်နဲ့ ကပ်ဆိုက်ပျက်စီးသွားတယ် နောက်တချက်က ရှေ့ခေါတ် မာယန်းလူမျိုးတွေရဲ့ ပြက္ခဒိန် မှာလည်း 2012က နောက်ဆုံးဖြစ်နေတယ် စတဲ့ သဘာဝလွန်အကြောင်းတွေကလည်း ရှိနေတော့ဗျာ မေးခွန်းတခုလောက်တော့ ကျနော်ကို မေးခွန်းပြူ comment မှာ လာရေးဗျာ ကမ္ဘာပျက် သွားပီတော့ ...